Pakistana: Ankizy 240.000 Tsy Nahazo Fanefitry Ny Lefakozatra · Global Voices teny Malagasy
Pakistana: Ankizy 240.000 Tsy Nahazo Fanefitry Ny Lefakozatra
Voadika ny 29 Jolay 2012 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Manodidina ny ampahefatra tapitrisa ny zaza bodo tandindonin'ny aretina lefakozatra, noho ny fandraràna ny fidiran'ny fanefitry ny lefakozatra ataon'ny Taliban any amin'ny faritra FATA (Federally Administrated Tribal Areas),na faritra ambany fifehezana federaly any Pakistana
Hafiz Gul Bahadur filohan'ny Taliban any Pakistana dia nandràra ny fidiran'ny fanefitry ny lefakozatra ho fanoherana ny fitsikilovana amerikana sy ny fanafihana amin'ny alàlan'ny ‘drone’ (fiaramanidina madinika baikoina avy lavitra) any Waziristan, FATA.
Pakistana no iray amin'ireo firenena telo sisa tavela amin'izao tontolo izao hanjakan'ny lefakozatra. Ny fanentanana ady amin'ny lefakozatra nataon'ny governemanta pakistane farany teo dia mahakasika ankizy 35 tapitrisa latsaky ny 5 taona. Fahasalaman'ankizy 160.000 any Atsimon'i Waziristan ary 80.000 any Avaratry Waziristan no lalaovina amin'io fandraràna io.
Ny Talibana Pakistane dia manahy fa fanafenana ny fitsikilovana raha ny marina io fanentanana ady amin'ny lefakozatra io. Tamin'ny May 2011, nisy fanentanana fanefitra ady amin'ny tazovony sandoka nataon'ny amerikana tamin'ny alàlan'ny dokotera Pakistane Dr. Afridi tany Abbotabad, Pakistana, izay nitarika tamin'ny nisamborana an'i Osama bin Laden.
Tanaty taratasy iray nozarain'i Mullah Nazir, mpitondra tenin'ny Taliban pakistane, , dia nilaza izy fa nanameloka ilay fanentanana hanaovana fanefitra sartia ” ampiasain'ireo hery tsy azo itokiasana ny haino aman-jery, ny fanabeazana ary ny fandrosoana mba ho fitaovana handrebirebena ny Silamo.”
Mpiasan'ny fahasalamana iray manome ny fanefitry ny lefakozatra atete amin'ny zaza mandritra ny 3 andro fanentanana amin'ny ady amin'ny lefakozatra any Chaman. Sary avy tamin'i Owais Aslam Ali. Zon'ny mpamorona Demotix
Nandritra ny jirga (fivorian'ny foko) nataon'ireo 200 mpitarika ny Pashtun tamin'ny 18 Jolay 2012 teo dia nankatoavina ilay fandraràna mba ho fanoherana ny fanafihana amin'ny drone ataon'ny amerikana. Ny lohan'ny foko Turikhel, Malak Mamoor Khan dia niteny fa mbola loza kokoa noho ny otrikaretin'ny lefakozatra ny drone, satria ‘ mahalana vao misy zaza iray matin'ny lefakozatra raha an-jatony ny zaza maty noho ny drone.’
Nisy fivoarana iray hafa niseho izay kapoka mavesatra ho an'ny fanentanana ny fanafoanana ny lefakozatra any Pakistana dia ny fanafihana ny mpitsabo ao amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fahasalamana (OMS), teratany Ghaneana, vao haingana, izay nanao vakisiny ireo ankizy tany amin'ny manodidina an'i Karachi, tanànan-tseranana iray ao atsimon'i Pakistana. Notifirin'ny olona roa ny fiarany raha iny izy niala tany amin'ny faritra tena mahantra an'ny foko Pashtun (izay olona nandositra ny herisetra avy any avaratra andrefan'i Pakistana sy ny faritra FATA ny sasany amin'ny mponina ao) iny. Naratra mafy izy fa velona ihany. Tsy mazava na misy ifamatorany amin'ny foko sy ny fandraràna ny fampidirana ny fanefitry ny lefakozatra any amin'ny faritry ny FATA io fanafihana mpitsabo tany Karachi io na tsia.
Ankoatra izay, ny gazety ao an-toerana dia nitatitra fa nisy ekipa mpanao fanefitry ny lefakozatra voadaroka tany Islamabad renivohitra, ary voatifitra ny ekipa sasany tany Jacobabad, any Sindh. Amin'ny tatitra hafa avy any Muzaffargarh, fileovana iray any Punjab, ny mpitondra fivavahana ao an-toerana dia nanamafy fa ady atao amin'ny Silamo sy ady atao amin'ny Pakistana io fanentanana ady amin'ny lefakozatra io.
Maneho hevitra amim-pahamalinana ny fihetsik'ilay mpitondra fivavahana i Mirza :
“Fanesona ny fiantsoan'ny mullah jihad amin'ny fanaovana vaksiny raha tokony ho fiantsoana jihad amin'ny tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra, mosary sy aretina no ataony. Ambonin'izay tsy azon'ny mpitandro filaminana samborina ny mullah, raha tsy misy fiovàna ? Tsy mbola nisy mullah voasazy noho ny ratsy vitany na noho ny fanararaotany ny fivavahana izany. Tsy mbola nisy mullah miantso fatwa ho azy.”
Nampivanàka ny maro io hetsika fiadiana amin'ny lefakozatra io. Ian Fairley maneho hevitra ao anaty lahatsoratra iray :
“Eo indrindra isika izao, lehilahy lehibe manampatra ny fahefany amin'ny vehivavy sy ny ankizy, setrasetra amin'ny endriny tena ratsy satria ataony amin'ny anaran'ny fivavahana izany. Asaivo mifanatrika tsara amin'ny lehilahy tsotra ireo mahery fo ireo fa ho ampiasainy ny ankizy ho fitaovana hiafenany.
Ny bitsika sasany milaza fa ny firehan-kevitra mahery fihetsika dia loza mananontanona ho an'i Pakistan. Ali Abbas Zaidi dia mibitsika hoe :
Drone na tsy drone, ny firehan-kevitra taliban dia hanidy ny sekolin-jazavavy, hamono, hanakana ny fanefitry ny lefakozatra, hampihatra sy hanery ny fampiharana ny finoana silamo.
— Ali Abbas Zaidi @Ali_Abbas_Zaidi 19 Jolay 2012
Salman dia mibitsika hoe :
Sahirana amin'ny fanapoahana rantsam-batana ny Taliban, aza manantena azy ireo hitsetra ireo mitondra kilema mandra-pahafaty noho ny lefakozatra. #Pakistan
— salman (@salman2979) 19 Jolay 2012
Aly dia manoratra hoe :
Tsy azoko ny paik'adin'ny Taliban mandràra ny fisorohana lefakozatra. Manandrana manameloka ny Amerikana amin'ny fanaovana sorona ny ain'ny ankizy an'arivony ve izy ireo ?
— Aly (@Repatriated) 19 Jolay 2012
Amin'ny lafiny iray, UNICEF dia nandray ilay kintan'ny lalao cricket hiasa ao aminy Pakistane Shahid Afridi amin'ny ady amin'ny lefakozatra. Shahid Afridi dia avy amin'ny fokon'ny Pashtun ary manana mpankafy betsaka ao amin'io vondrona io. Nanatevin-daharana ny fanentanan'ny Rotary “Efa Akaiky” izy ho fanohanana ny ady amin'ny lefakozatra. Vao haingana, Asifa Bhutto Zaradri, ambasadaoron'ny ady amin'ny lefakozatra any Pakistana sady zanakavavin'ny filohan'i Pakistana dia nanatevin-daharana io fanentanana io ihany koa.
Mila ny fiaraha-miasa akaikin'ny vahoaka sy ny mpitondra ny fanafoanana ny lefakozatra. Ny mpitondra fivavahana, ny vahoaka, ny fikambanan'ny olom-pirenena dia tsy maintsy miady ary mahalala ny lanjan'ny fanefitry ny lefakozatra ho an'ny ho avin'i Pakistana.
Afridi vs Polio dia mibitsika hoe :
Raha te-hahita an'i #Pakistan ho isan'ny #Firenena afaka amin'ny lefakozatra #PolioFreeCountries dia tokony ho liana amin'ny#lefakozatra ianao. Ankehitriny, mila ny fanampiantsika #Pakistan.
— Afridi vs Polio (@AfridivsPolio) 19 Jolay 2012
Araka ny antontan'isa navoakan'ny National Institute of Health Pakistan (NIHP) tamin'ny 2009, 2010, ary 2011 dia 116, 144, ary 173 ny tranganà lefakozatra niseho.